Nieves Munoz. Udliwanondlebe nombhali weeMfazwe eziCwangcisiweyo | Uncwadi lwangoku
Nieves Munoz. Udliwanondlebe nombhali weeMfazwe eziCwangcisiweyo
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 21/09/2021 12:00 | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi, Inoveli
Ukufota: uNieves Muñoz, umbhali wefayile yokupapasha yase-Edhasa.
UNunoves Munoz, UValladolid kunye nomongikazi ngokomsebenzi, uhlala enxulumene noncwadi, njengombhali wamabali, umbhali wemihlathi okanye umdibanisi kwiimagazini zoncwadi. Kunye Amadabi athulisiweyo wenze umtsi kwinoveli. Enkosi kakhulu ixesha lakho, ububele nokuzinikela kwakho olu dliwanondlebe apho athetha ngaye kunye nezinye izihloko ezininzi.
UNunoves Munoz Udliwanondlebe
UNCWADI LWANGOKU: Inoveli yakho inesihloko Amadabi athulisiweyo. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
NIEVES MUÑOZ: Inye i-anecdote malunga nesihloko. UDaniel Fernández, umhleli we-Edhasa, uphawule kuPenelope Acero, umhleli wam, ukuba kutheni singatshintshanga Iimfazwe ezithe cwaka, eyayingcono, kwaye zombini siyala kuba iyitshintsha ngokupheleleyo intsingiselo. Ayizomfazwe ezilwelwa kuthe cwaka (ezikhoyo), kodwa zezo zithulisiweyo ngenxa yesizathu esithile. Yiyo ke leyo i-crux yenoveli.
Kwelinye icala, kukho ezo iimfazwe zangaphakathi ukuba kwimeko egqwethekileyo balwa bodwa kwaye ababalwa. Ndiqinisekile (kwaye ndiyibonisa ngale ndlela) ukuba abantu banakho okona kulungileyo kunye nokubi kakhulu xa ukusinda kwabo kusengozini.
Kwaye kwelinye, kukho amadabi angazange axelelwe kwiincwadi zembali, njengoko kusenzeka kwinoveli yam, umbono kunye namava abasetyhini abathathe inxaxheba kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala. Ayisiyiyo yonke imisele, umlo ufikelele kwikona nganye.
Umbono wokuqala yayikukubhala kunika imbeko kubongikazi bokuqala abaziingcali othathe inxaxheba kukhuphiswano. Ukukhangela ulwazi malunga nabo ndize Marie Curie kunye nokuthatha kwakhe inxaxheba njengomongikazi wamavolontiya nanjengotitshala woochwepheshe be-radiology. Nguye okhokela umfundi ngesandla ukuba azi isibhedlele sentsimi kunye namava aso, kwaye unika umnyango ekungeneni kwabalinganiswa bokwenene, abasetyhini abaqhelekileyo, abongikazi, amavolontiya, abafazi abahlwempuzekileyo kunye nehenyukazi. Yi inoveli yekwayala, ke amacebo awohlukeneyo ahlangana kunye kwisiqingatha sesibini sebali.
NM: Bendiqala ukufunda, kodwa eyokuqala endiyikhumbulayo yayivela kwingqokelela yeHollister, endandizifunda zonke. Ukusuka apho ndaya ku AbahlanuIimfihlo ezisixhenxe, Abaphandi abathathu, ingqokelela ye I-Steamboat... Kule yokugqibela ndiyakhumbula ngothando olukhethekileyo Intombi kaSkycrow y Emva kwentambo.
Ndine Inkumbulo emnandi yelinye lamabali okuqala. Ndabhala ibali lesikolo, intelekelelo malunga nomzingeli owadubula ixhama kwaye intsomi yehlathi yaguqula umzingeli waba lixhama ukuze abone umonakalo awenzileyo. Utitshala ubuzile ukuba bandincedile ndaza ndathi hayi. Imini yonke bendijongene nengubo yedyasi, bohlwaywa ngokuxoka.
NM: Ngokwenene andina umbhali oyintloko. Ndifunde zonke izigaba ezingaphantsi kwaye kunzima ngaloo ndlela. Kodwa ndiza kunika igama ezinye zeembekiselo zam.
-Ngomtsalane, Tolkienkunjalo, kodwa kananjalo ekupheleni okanye kutshanje I-China Miéville.
-Into engeyonyani yebuchwepheshe, Ursula K. Le Guin kunye noMargaret Atwood ziyamangalisa.
- Uloyiko, ndiyamthanda umbhali waseSpain, UDavid jaso. Kwaye ke zakudala, Poe okanye Mfana osuka Eyona nto iphambili.
Kwincwadi yamabali, Amin Maalouf, noMika Waltari, UNowa gordon, UToti Martínez de Lezea o Iingelosi zaseIrisarri.
Inoveli yanamhlanje USándor Marai, uDonna Tarkumhla wam okwangoku ongekaziwa kakuhle kodwa ngubani oya kunika okuninzi ukuba athethe ngako: UAntonio Tocornal.
-Malunga neenoveli zolwaphulo-mthetho, ndiza kuzithatha UStieg Larsson, UDennis Lehane y NguJohn Connolly.
-Kwaye uthandana ne UPaulina Simmons y UDiana Gabaldon.
NM: Ngumbuzo onzima lowo. Ndiza kudubula nge-nostalgia. Ndizifundile iincwadi ze U-Anne weGreen Gables ebusheni kwaye amaxesha ngamaxesha, kwiintsuku ezingwevu, ndaphinda ndazifunda. Bandizisela uxolo. Ke ndiyaqhubeka UAna Shirley.
NM: Ndikhoyo off-kwendlela umbhali ngokunyanzelwa, kuba ukuba andithathi nzuzo ngalo naliphi na ixesha kunye nexesha lokubhala, ngekhe ndigqibe kwanto. Ekuphela kwento kukuba ndinengxaki ye-tinnitus (ndiva ingxolo engapheliyo) kwaye Ndikhetha ukungabhali cwaka kuba iyandikhathaza. Ke ndibeka iTV, umculo, okanye ukuba ndingaphandle, ingxolo yasesitratweni.
NM: Ngokusisiseko njengombuzo odlulileyo, xa bendishiya kwaye ndingathatha ilaptop, naphi na kwaye nanini na.
NM: Ndilindele lo mbuzo. Ndiyathanda ukutshintsha yohlobo lokufunda, ngapha koko ndiya kudikwa kukufunda.
NM: Ndinaye Itoletum, de UMireia Giménez Higón emva kokugqiba Uvusiwe, Ukusuka kwiqabane lam Vic echegoyen. Eyokuqala ye-adventure eyabekwa eToledo ngenkulungwane ye-1755 kwaye eyesibini ibalisa ngeziganeko zenyikima yaseLisbon yowe-XNUMX.
Justo Ndigqibile ukuyila okokuqala kwinoveli yam yesibini, esele ezandleni zomhleli wam, ndiye ndithathe iintsuku ezimbalwa ekubhaleni, kuba le nkqubo ibinamandla.
KWI: Ucinga ukuba injani imeko yokupapasha?
NM: Ndisandul 'ukufika kweli hlabathi kwaye andazi ukuba ndingakwazi ukuphawula ngento ethile. Kubonakala kum ukuba kukho enye Isipho esikhohlakeleyo seendaba zokuhlela kwaye akukho ntengiso zininzi. Ukuhlala unomdla kwinoveli okwethutyana kunzima kwiimpapasho ezininzi. Kwelinye icala, i ingxaki yobugqwetha Sisibetho esingasombululwanga. Ngomsebenzi obandakanyekayo ekubhaleni inoveli elungileyo, lilusizi ukuba alixatyiswanga ngokufanelekileyo.
Ndithumele lo mbhalo ungakhange ulindelwe, into yokuba ndigqibile ukubhala inoveli enamaphepha angama-540 yayisele iyimpumelelo kum. Ke yonke into eyenzekileyo emva kwayo ibimnandi, ngakumbi izimvo zabafundi abangqinayo abalinganiswa kunye namabali abo. Anditshintshi oko nantoni na emhlabeni.
NM: Ndihlala ndifumana into kuwo onke amava, nkqu nezona zinzima. Ndiphila mihla le ndigula, ndibhubha ndinentlekele. Kwaye nakwiimeko ezinzima kakhulu, amabali amahle aphuma. Kuxhomekeke kukukhapha, kwinto odibana nayo nabanye, nakwinto oncedayo esuka kuwe. Njengoko benditshilo ekuqaleni kodliwanondlebe, umntu ngamnye kuthi unokukwazi ukwenza okona kulungileyo kunye nokubi, ndihlala ndizama ukukhangela okuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Nieves Munoz. Udliwanondlebe nombhali weeMfazwe eziCwangcisiweyo
UPablo noVirginia, nguMarcel Mithois. Ngokufutshane balisa